Aquitaine: anoverengeka nhoroondo anokunda wePlanet 2020 mubairo | Zvazvino Zvinyorwa
Aquitaine ndiro razvino bhuku remunyori anotengesa zvakanyanya muSpain: Eva García Sáenz de Urturi. Rakaburitswa muna2020, ndeye medieval nhoroondo yenhau, ine hunhu hukuru ndiElonor weAkitaine - anozivikanwawo saEleanor - uyo achaita zvese zvinobvira kuti aone chiri kukonzera kupondwa kwababa vake, Duke Guilhèm X wePeitieus.
Iyo zano rakakomberedzwa nema enigmas, sigil, kutsiva uye kunyange makunakuna Senge kuti paive nemutambo wezvigaro, pachave nehondo zhinji dziripo mune iyi nyaya, iyo, mukuwedzera, ine vatatu vane rudo. Nebhuku rino munyori akazvisimbisa mundima yekunyora, chokwadi icho chakasimbisazve nekuwana mubairo wePlanet mu2020.
1 Pfupiso Aquitaine (2020)
1.1 Rufu runoshamisa
1.2 Zano re kutsiva
1.3 Kutendeuka kusingatarisirwi
2 Kuongorora kweAkitaine (2020)
2.3 Kugadzirira kwetsamba
3.1 Zvidzidzo uye ruzivo rwebasa
3.3 Mabhuku naEva García Sáenz de Urturi
Mu 1.137, Guilhem X, "Duke weAkitaine", kusvika kuCompostela mushure merwendo rurefu. Kusvika pamberi pearitari huru yechedhedral, asingatarisiri anowira pasi akafa. Ganda rako -i rinoshanduka bhuruu- inoratidzirwa ne "gondo reropa", kushungurudzwa kwekare kwakaiswa muNormandy. Vese vanoona izvo vanovhundutswa nerufu rwusinganzwisisike rwemutungamiri.
Mumwe wevanhu vanobatwa zvakanyanya mwanasikana wake: maDuchess Eleanor, who, game chete 13 makore, ndinofanira kutora umambo. Her inosimbisa izvozvo baba vake akaurayiwa nevaCapetians (hama dzaMambo Luy VI weFrance), nekuda kwezvavanofarira zvikuru munzvimbo dzeAkitaine.
Zano re kutsiva
Semhedzisiro yezvose zvakaitika, mugari wenhaka pachigaro anoumba chirongwa chisina kunaka chekutsiva chaachatsvaga kupinda muumambo hweFrance uye kuhwina chivimbo chayo. Kuzadzisa chinangwa chayo, musikana achanyepedzera kuda kwababa vake. Gwaro rinoratidza sekuda kwemuchinda muchato pakati pemwanasikana wake y iyo Kid King (Luy VII), mwanakomana waMambo Luy VI weFrance.
Asati atanga hunyengeri hwake, ma duchess achareurura zvese zvaakange aronga kune mupirisita wechidiki, anochengetedza hunhu husingafungidzirwe.
Leonor anotasva kusvikira asvika na mambo Luy VI weFrance, inozivikanwa se "Fat King". Izvi, nekukurumidza, Anoronga muchato pakati paDuchess nemwanakomana wake. Panguva yemabiko emhemberero, pakarepo, mambo inodonha ikafa, mumamiriro akafanana naGuilhèm X. Izvi zvinokanganisa kufungidzira kwaLeonor, uyo zvino anofanira kutungamira France nevechidiki Luy.
Vese vari vaviri ichatanga kuferefetwa kunonetesa nezverufu rwusina kujairika yevarume vakakosha ava. Neizvi, vachatendeukira kukitsi dzeAkitania, ari tsori dzinozivikanwa wemachinda. Vechidiki uye vasina ruzivo madzimambo vanofanirwa kupfuura nemamiriro mazhinji. Mukati merwendo urwu, mukomana - uyo akasiyiwa musango makumi emakore apfuura - achaita basa rekuratidzira.
Ndicho nhoroondo yenhau inowedzerwa nenhema, set kunyanya munharaunda yeFrance. Mune yavo Mapeji 416, nhoroondo dzenhoroondo Zvikamu zvina, yakagadziriswazve Zvitsauko zvipfupi 64. Basa racho rine maviri marudzi enhoroondo: chekutanga munhu, naLeonor naLuy; y en munhu wechitatu, nemunyori anoziva zvese.
Iyo Basque Literat yakaratidzwa makore gumi muhupenyu hwaEleanor weAkitaine, mukadzi ane nhoroondo isinganzwisisike - akauya kuzotungamira hutatu hwakakosha humambo hweEurope. Iyo rongedzero inozadzisa chakavanzika chevakafa yemaviri akakosha manhamba enguva ine chokwadi chekunyepedzera. Pamusoro pezvo, anoongorora mune dzimwe nyaya, dzega uye dzekunze, izvo zvinopa akasiyana nuances kunyaya.
Eva akavaka mukurumbira wakanaka kune yake enhoroondo enganonyorwa; kutanga, yehunhu hwerondedzero; uye chechipiri, kugadzirira kwaanoita asati uye panguva yekugadzirira kwemabhuku ake. Pakupera kwechirongwa che Aquitaine, munyori anokumikidza akati wandei mapeji kutsanangura zvakadzama zvinyorwa. Mavari, anoti ave kuverenga mabhuku anodarika zana uye ruzivo rwendo rwake kune yaimbove iyo Aquitaine ndima.
Parwendo urwu akashanyira Bordeaux, Poitiers uye Abbey yeFontevrault, uko Eleonor weAkitaine akafa ndokuvigwa. Ikoko akaongorora nezvetsika uye gastronomy yenguva iyoyo, iyo yaakawedzera kupa iyo nyaya kuwedzera kwechokwadi. Akatorawo kosi yekuvhenekesa, maakadzidza nezve hunyanzvi hwaishandiswa nemamonki kuita zvinyorwa zvekare.
Sáenz de Urturi akawedzera a boka hombe revatambi kunoverengeka - chaiko, kwechikamu chikuru. Kuva nemutsauko, nekuda kwezvikonzero zviri pachena, protagonists ayo: Leonor naLuy; Nekudaro, munyori haana kuregeredza vanyori vechipiri zvachose, asi akavapa chimiro chakanakisa uye netembere dzakatsanangurwa zvakakwana. Pakati pekupedzisira kumira: Raymond de Poitiers - babamunini vemuporofita mukuru- "Mwana", Adamar naGaleran.
Aquitaine inoverengeka iyo ha zvakakonzera kunyongana kukuru, kusvika pakufungidzirwa chiitiko chekunyora. Nekudaro, sekufanana nebasa rese, rine vanokanganisa, vanopokana kuti yakawanda yezvakaitika zvirimo. Parizvino, iwo mavara ane 72% mvumo nevaverengi pawebhu.
Yayo 5.807 Amazon ongororo anoiisa iyo mu XNUMXst nzvimbo mukutengesa muboka reFrench Literature. Vazhinji vashandisi vanoyera nehuremu hwakanyanya, iine avhareji ye4,2 / 5. Inofanira kucherechedzwa iyo 48% yakapa nyeredzi shanu kubasa, uye chete 14% yakapihwa 3 nyeredzi kana pasi.
Eva García Sáenz de Urturi akazvarwa musi waAugust 20, 1972 muVitoria, imwe yenzvimbo dzakanakisa dzepakati nepakati muBasque Nyika; mwanasikana wegweta uye mudzidzisi. Akararama kusvika zera regumi nemashanu mutaundi rekumusha kwake, kuti azotevera kufamba nemhuri yake kuAlicante, guta raunogara iye zvino.
Zvese muhudiki hwake uye mukuyaruka kwake, airatidzwa nekuve anofarira kuverenga. Kubva pamakore gumi nemana akatanga kunyora, izvi nekuda kwesimba rekuti ndiani aive purofesa wake wemabhuku pachikoro cheSan Viator. Nguva inotevera, akatora makosi ekunyora enhau yekugadzira mumasangano anokosha echiSpanish. Munguva iyoyo, akanyora nyaya dzinoverengeka pfupi dzaakakunda nadzo mumakwikwi.
Nehunyanzvi, akadzidza degree muOptics neOptometry, apo aive achidzidzira iro basa - pazera ramakore makumi maviri nemanomwe - akakwanisa kumhanyisa kambani yemarudzi akawanda. Mushure memakore gumi mundima iyi, akatanga kushanda paUniversity yeAlicante. Kubva muna 2009 akadzokera kumabhuku; Ndakapedza husiku ndichitsvaga nekunyora mitsara mishoma rinozove bhuku rake rekutanga makore matatu akatevera.
Mu 2012, munyori weBasque kuzvishambadza rwiyo rwake rwekutanga pachikuva Amazon: Iyo saga yeakagara-ararama: iyo yekare mhuri. Iyi nhoroondo yenhoroondo yakabata pfungwa dzezviuru zvevateveri, izvo zvakakonzera panguva imwe chete kudzikisira kukuru kwekunyora. Muna 2014, akapedzisa biology ne: Vanakomana vaAdamu ndokupa bhuku rake rechitatu: Passage kuenda kuTahiti; mushure mekubudirira kwevaviri, akafunga kuzvipira zvizere kumabhuku.
Muna 2016 akaburitsa iyo White Guta Trilogy, nhevedzano iyo munyori wekunyora akawana nayo mamirioni evaverengi uye izvo akamutora kuva munyori bestseller. Mushure memakore mana, bhuku rekutanga mune akateedzana: Kunyarara kweguta jena, yakagadziriswa kune iyo cinema naDaniel Calparsoro. Mushure menguva yakareba yekushanda nesimba uye zvinyorwa, akapa runyorwa rwake rwekupedzisira: Aquitaine (2020).
Mabhuku naEva García Sáenz de Urturi
Saga yeiyo Yakagara-ini Ini: Mhuri Yekare (2012)
Iyo Saga yeiyo Yakagara-Kurarama II: Vanakomana vaAdamu (2014)
Passage kuenda kuTahiti (2014)
White City Trilogy I: Kunyarara kweGuta Dzvuku (2016)
White City Trilogy II: Iyo Rites yeMvura (2017)
White City Trilogy III: Iyo Nguva Ishe (2018)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Aquitaine